Yangon (27.03.21) - Fight For Democracy
Article Updated: March 27, 2021
တော်လှန်ရေးနေ့ နေ့လည်ပိုင်းအထိ အင်းစိန်မြို့နယ် အတွင်း CDM ပြုလုပ်နေသည့်ရဲဝန်ထမ်းတစ်ဦးအပါအဝင် လေးဦးကျဆုံးခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရသူ ၃ ဦးရှိပါတယ်။ကျဆုံးသူများမှာ-*ကိုတေဇာထွန်း ၃၁ နှစ် (ထ၂ အင်းစိန် ကျောင်းသားဟောင်း)*ကိုဇော်လေးကို ၄၉ နှစ် (သားသမီး ၄ဦး၏ဖခင်)*မောင်ချစ်ဘိုငြိမ်း ၂၁ နှစ်‌(ဟံသာဝတီ ယူ၂၁ အသင်းခေါင်းဆောင်)*မောင်ချစ်လင်းသူ (CDM ရဲဝန်ထမ်း) ၂၁ နှစ် တို့ဖြစ်ပါတယ်။Edited အင်းစိန် (ဖော့ကန်) ၌ပြည်သူတစ်ဦး ထပ်မံကျဆူံးသည်ဟု အခိုင်အမာသတင်းရရှိပါတယ်။စုစုပေါင်းကျဆုံး ပြည်သူ ၅ ဦးရှိနေပါပြီ။
မတ်လ၂၇ရက်နေ့ အင်းစိန်မြို့နယ်ဖော့ကန်ရပ်ကွက်အတွင်းနေ့လည်၂နာရီခန့်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရမ်းကားပစ်ခတ်မှု‌ ‌ကြောင့်ပြည်သူတစ်ဦးကျည်ထိမှန်ကျဆုံး။ မတ်လ၂၇ရက်နေ့ တော်လှန်ရေးနေ့‌တွင်အင်းစိန်မြို့နယ်အတွင်းကျဆုံးသူ ၅ဦးထိရှိလာခဲ့ပါပြီ။ (Insein news)
မရမ်းကုန်း (၂)ရပ်ကွက်အသက် တစ်နှစ်‌ကျော် ကလေးတစ်ယောက် ရာဘာကျည် မျက်လုံးကို ထိထားပါတယ်
ဒလ သန်းခေါင်ယံပစ်ခတ်မှု အရပ်သား ၈ ဦးသေဆုံးကာ ၁၈ ဦးဒဏ်ရာရ
၁ ။ဒလမြို့နယ် သန်းခေါင်ယံ ပစ်ခတ်မှုကြောင့်
၂ ။ဒလ သန်းခေါင်ယံ စစ်တပ်၏အ​ကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရဲမြတ်သူ(ခ)ရေချမ်း(25) နှစ်၊ကျောကုန်း
4.ဒလ သန်း​ခေါင်ယံ စစ်တပ်၏အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဦးဝင်းမြင့်(46) နှစ်၊ကျဆုံး။ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်၊ နတ်မောက်လမ်း။
3.ဒလ ညသန်းခေါင်ယံ စစ်တပ်၏အကြမ်းဖက်ပစ်ခတိမှုကြောင့် ကျော်​ထက်အောင်(ခ)ဖိုးဓမ္မ
(19) နှစ်၊လည်ပင်းထိ ကျဆုံး၊ဒလ ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်၊ နတ်မောက်လမ်း။09761932416
5.ဒလ သန်း​ခေါင်ယံ စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် မောင်အောင်ဇင်မြင့်
ဧရာဝတီ (၁) လမ်း၊ ညောင်ကုန်းရပ်ကွက်
သန်လျင်ရဲ့ နေ့ခင်း ၂နာရီအထိအခြေအနေပါ
Port Great syndicate free spins Beanstalk Slots machines
MyitkyinaMilitary cracked down Myitkyina's peaceful protesters. After this terrible dispersing, protesters made self-defense by themselves.
19 Feb 2021 7.18 pm